कर्णेल सापको कुकुर बौलाएछ | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 11/08/2008 - 14:51
एक दिन कर्णेल जङ्गध्वज राणाको जर्मन शेफर्ड जातको लाइका कुकुर एक्कासी बौलाएछ । नत्र कहिल्यै उत्तेजित नहुने भद्र स्वभावको कुकुर आफ्नै मालिक्नी डल्फिन बेबीलाई बलात्कार गर्न किन जाइलाग्थ्यो र < यो सबैका लागि अनौठो लाग्दै कुरा भएन र < तर जति आश्चर्य लागे पनि कुरो चाहीं पक्कै हो । यस कुराका साक्षी डल्फिन बेबीका बाबु-आमा खुदै छन् । अझ उसकै भाइ टाइसन राणा र घरका अरु धाई सुसारे नोकर चाकर पनि छन् ।
एक साँझ ड्यूटीबाट फर्केर घरभित्र पस्तापस्तै आफ्नी किशोरी छोरी डल्फिन बेबीलाई आफ्नै घरको डाँगोले बलात्कार गर्न खोजेको देखेर कर्णेल राणाको आश्चर्य साथै रिसको सीमा रहेन । उनको खान्दानी राणा क्रोध चरम विन्दुमा पुग्यो । के यो डाँगो-लाइका बौलाएछ < कर्णेलको हात आफ्नो कम्मरमा छालाको दापमा झुण्डिएको रिभल्बरमा पर्‍यो । उनले यता उति केही नसोची त्यो रिभल्बर झिकेर गोली ठोकिदिए - "ठाइँ ..... ठाइँ ..... ठाइँ "
घरभरि खैला बैला मच्चियो - "लाइका बौलाएछ । कर्सापले त्यसलाई गोली मारिबक्स्यो ।" आफ्नी छोरीलाई बलात्कार गर्न खोज्ने त्यो कुकुरलाई गोली ठोक्नु एउटा खान्दानी फौजीका लागि अस्वाभाविक पनि त थिएन । मालिक मालिक्नी खास गरी डल्फिन बेबीकै अत्यन्त प्यारो लाइका कुकुर ऐया पनि भन्न नपाइ ठहरै भयो !
लाइका - यो जर्मन शेर्फड जातिको सुन्दर कुकुर कर्णेललाई त्यति बेलाको जर्मन राजदूतले दिएको थियो । अझ कर्णेललाई पनि होइन बेबी डल्फिन राणालाई उपहारमा दिएको । त्यतिखेर नेपालमा जर्मन राजदूतावास थिएन भारतकै लागि नियुक्त जर्मन राजदूत दिल्लीमै बसेर नेपालको मामिला पनि हेर्थ्यो । कहिले काहीं त्यस्तै राजकीय समारोह पर्दा मात्र नेपाल आउँथ्यो । एक पल्ट त्यस्तै एउटा समारोहमा ऊ नेपाल निम्त्याइएको थियो र परिवार सहित ऊ आएको थियो ।
अनि नेपाल बसुञ्जेल उसका लागि आवास प्रवन्ध मिलाउनेमा कर्णेल जङ्गध्वज राणा खटिएका थिए । उनको प्रबन्धबाट राजदूत हाइनरिख डेम्लर र श्रीमती मार्गारेट हेम्लर बडो प्रभावित भएका थिए । उनीहरूको नेपाल बसुञ्जेलको अन्तरालमा निकै राम्रो सम्बन्ध बनेको थियो । श्रीमती हेम्लर उनीहरूलाई बराबर चियापानमा बोलाउने गर्दथिन् । आमाबाबुको साथमा नौ दश वर्षी छोरी बेबी डल्फिन राणा पनि जाने गर्थी ।
बडा बडा निर्दोष आँखा, गोरो रोगनमा कालो घना कपाल, हिस्सी परेको निश्चल अनुहार ! उसलाई देख्ता डल्फिन माछाको हर्दम हाँसिरहेझैं निश्चल अनुहारको संझना आउँथ्यो । त्यसैले उसको नाउँ नै डल्फिन राखेका थिए ।
एक दिन यस्तै दोस्रो प्रहरको चियापानको निम्तोमा आमाबाबुका साथमा बेबी डल्फिन राणा पनि गएकी थिई । सकिंदो शरद र शुरु हेमन्त ऋतुको प्यारो मौसम ! उनीहरू अतिथिशालाको सुन्दर बगैंचा रत्न बाग (डाइमन गार्डेन_ को हरियो चौरमा बसेका थिए । हेमन्त ऋतुको शुरु दोस्रो प्रहरको न्यानो घामको सुम्सुम्याइको साथमा रमाइला र मीठा मीठा गफ गर्दै चियाको सुर्को सुर्क्याउदै सवैजना आनन्दको अनुभूति संगालिरहेका थिए ।
"हाम्रो अब दिल्ली फर्कने दिन आयो के गर्नु, नेपालको यस्तो स्वर्गीय आनन्द, तपाईंहरूको यति आत्मीय साथ छोडेर दिल्लीको त्यो उसिन्ने गर्मी खप्न जाने इच्छा त छैन तर के गर्नु - नोकर भए पछि आफ्नो ड्यूटी त गर्नै पर्‍यो ! " राजदूत हेम्लरले उदास भएर भन्यो । अझ श्रीमती हेम्लरको उदास अनुहारले लोग्नेलाई भन्दा पनि यहाँको यो आनन्द छोडेर जानु उसलाई पटक्कै मन नभएको कुरा बताइरहेको थियो । तर ऊ पनि लाचार थिई । उसले गुनासोको स्वरमा लोग्नेसँग भनी - "तपाईं एउटा जर्मन दूतावास यहीं बनाउनु पर्छ भनेर सरकारसँग किन सिफारिस गर्नुहुन्न <"
"मैले सिफारिस गर्दैमा हुँदोहो त म सरकारसँग मात्रै किन < इश्वरसँग 'मलाई यही देशमा जन्माइदेऊ' भन्ने थिएँ ।" - राजदूतले केही ठट्यौलो र केही आकांक्षाको स्वरमा भन्यो । त्यसै बेला उनीहरूकी किशोरी छोरी आएन हेम्लर त्यहाँ आई उसले वगलमा एउटा सानो छाउरो बोकेकी थिई । त्यो सानो छाउरो डल्फिन बेबीलाई देख्ने बित्तिकै सुन्दरी एनीको अँगालोबाट फुत्किएर दगुर्दै डल्फिनको काखमा लुटपुटिन आइ पुग्यो । ऊ डल्फिनको काखमा उफ्र‌दै उसको आँखा, नाक, मुख, गर्दन सबैतिर चुम्मा लिन थाल्यो । डल्फिन पनि उसलाई दुबै हातले च्यापेर आफ्नो छातीमा टास्तै उसको गालामा गाला जोर्दै, सबैतिर चुम्न थाली । त्यो दृश्य कस्तो लाग्थ्यो भने यी दुइ मानव पुत्री र श्वान पुत्रको मिलन अहिलेको मात्र होइन, यो त उनीहरूको जन्म जन्मान्तरको आत्मीय सम्बन्ध हो !
यो अत्यन्त संवेदनशील मिलन दृश्य देखेर राजदूत दम्पति पनि मुग्ध भएका थिए । उनीहरू बहुतै संवेद्य भएका थिए ।
"बुबा ! यो पप्पी कति राम्रो छ हगि , कति माया लाग्दो । कति डार्लिङ्ग ! ......... बुबा हामीलाई पनि एउटा यस्तै पपी ल्याइदिस्योस् न । है बुबा - है, है !" - बेबी डल्फिन छाउरोलाई त्यसै त्यसै आफूमै लीन गराउँला झैं छातीमा टाँसेर बाबूसँग आग्रह गर्न थालेकी थिई, लाडिन थालेकी थिई । त्यो अत्यन्त भावुक क्रीडा गहिरिएर हेरिरहेको राजदूतले एक्कासी सोध्यो - "नानीलाई पप्पी मन पर्छ Û हो < यो तिमीलाई भयो Û तिमी यसलाई धेरै धेरै माया गर्नु ल Û "
"होइन होइन महामहीम (योर एक्सेलेन्सी) त्यसो नगरौं ! यो त यसको बच्कानापन हो, बच्चाको क्षणिक सोख रहर .... नयाँ कुरा देख्यो कि त चाहिहाल्ने । अनि त्यो पाएपछि एक दुइ घण्टा बढीमा एकाध दिनमै बिर्सने; त्यत्तिकै फालिदिने । ...महामहीमले यस्तो गर्नु पर्दैन ।" कर्णेलले बडो सङ्कोच मानेर भने । तर राजदूतले बडो आग्रहसँग भन्यो - "न, न, मलाई कुनै बोझ छैन कर्णेल , सङ्कोच नमान्नोस् । यो हाम्रो तर्फबाट छोरीलाई मायाको सानो चिनो ।"
"एस् कर्णेल, यो बेबीलाई हाम्रो सानो गिफ्ट (उपहार)" श्रीमती मार्गरेट हेम्लरलेपनि अत्यन्त खुशीको स्वरमा लोग्नेको समर्थन गरिन् । यसरी कर्णेल जङ्गध्वज हमालको घरमा जर्मन शेर्फड जातिको त्यो छाउरो - लाइकाको प्रवेश भयो । त्यसको जर्मन नाउँ त के थियो कुन्नि, तर डल्फिन बेबीले चन्द्र लोकको पहिलो यात्रु कुकुर लाइकाको नाउँ दिएर त्यसको इज्जत गरेकी थिई ।
लाइका कर्णेलको घरमा बेबी डल्फिन राणाकै साथमा अत्यन्त पुल्पुलिएर हुर्कदै बढ्दै अब चार वर्षे कुर्कुरे बैंसको गल्लीमा लर्खराउन थालेको थियो । अनि बेबी डल्फिन पनि बाल्यवयको अन्तिम मोडबाट उतापट्टिको किशोर वय प्रवेशको नौलो फूलबारीमा प्रवेश गर्न तर्खराउन थालेकी थिई । यसरी शिशिरको सँघारबाट वसन्तको पहिलो फूलमा हाँस्न खोजेको कोपिला जस्ती मानव किशोरी र उरण्ठ्यौले बैंसले कुतकुतिएको श्वानपुत्र लाइकाको मितेरी भावना अप्ठेरो गोरेटो हुँदै सँगसँगै हिड्न थालेको थियो ।
लाइका जवानीको पूर्ण नसामा आँखाभरि के के चाहनाको चमक बोकेर संसारलाई हेर्न थालेको थियो । उसका सम्पूर्ण नसाहरूमा तातो रगत दगुर्न थालेको थियो । त्यसैको गर्मीले उसका सबै अङ्गमा फूर्ति र गति भरिदिएको थियो । तर ऊ घरको चोटा-कोठा, छत बरण्डाको चारकिल्ला नाघेर बाहिर स्वतन्त्र हावामा जान पाउँदैनथ्यो । ऊ सम्भ्रान्त घरको उच्च जातको कुकुर, उसलाई परिवारको सम्भ्रान्त परिवेशबाट बाहिर जान दियो भने उसले गल्लीका खिचाहरूसँग मिसिएर आफ्नो जात फाल्ने जोखिम थियो । त्यतिमात्र होइन बाहिरका ढल रछानमा मिल्किएका सडेका कुहिएका गलेका फोहर विष्टाहरूमा थुतुनु गाडेर पूरै गल्ली खिचाको संस्कार, चरित्र बोक्न सक्थ्यो । त्यसैले उसलाई एक्लै घरबाट बाहिर खुलामा घुम्ने अनुमति थिएन । बाहिर ऊ त्यति बेला मात्र जान पाउँथ्यो, जुन बेला कर्साप बाहिर दौडाहा सौडाहा र लामो ड्यूटीमा हुँदैनथे र घरै हुन्थे ।
उनी आफू घरै भएको बेलामा भने प्रायः साँझ बिहान ताजा हावा खान (इभनिङ्ग वाक मोर्निङ्ग वाकमा) निस्कन्थे । त्यतिखेर उनी लाइकालाई पनि लिएर जान्थे । कित आफू शिकार गएको बेलामा सँगै लान्थे । तर त्यस बेला पनि ऊ स्वतन्त्र विचरण गर्न भने पाउँदैनथ्यो; साङलाले बाँधिएर घिच्चिएको हुन्थ्यो । त्यसैले बैंसको काउकुतीले कुत्कुतिएर स्वतन्त्र घुम्ने उसको चाहना त्यत्तिकै कुण्ठित हुन्थ्यो । अनि ऊ घर भित्रैको कोठा, चोटा, छत, बरण्डाको सीमित घेरा भित्र उद्विग्न भएर कुइ-कुइं गर्दै छत बरण्डाको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म लरखराइरहन्थ्यो । उसको यो रन्थन्याइ डल्फिन बेबी स्कूलबाट घर फर्केपछि मात्र अलि मत्थर हुन्थ्यो । किन भने ऊ बेबीसँग खेल्न पाउँथ्यो ।
हुन त बेबी बाहिर गएको र कर्णेलको लामो अनुपस्थितिको मौका छोपेर कर्णेल्नी मोनिका राणा पनि उससँग मन बहलाउन र उसको न्यास्रो मेटाउन नखोज्ने होइनन्; उसलाई छातीमा टाँसेर आफ्नो मन भरिको माया पोख्न उनको अन्तरकी बालिकाले जुरमुराउन नखोज्ने त कहाँ हो र < तर कहाँकी ताजा गुनकेशरी बेबी कर्णेल अनि कहाँकी उसकी आमा-ओइलाएको पलाँस जस्ती अधबैंसे पोथी । कुकुर भनेर कहाँ हुन्छ र < ताजा र बासी सुँघ्न सक्ने शक्ति त उसमा पनि त हुन्छ । त्यसैले ऊ मोनिका राणाको बासी अँगालोबाट बलैले फुत्किएर परतिर भाग्दथ्यो । र सकेसम्म ऊ उनको नजिकै पर्दैनथ्यो; तर्केर हिंड्थ्यो । अनि न्यास्रिएझैं एउटा कुनामा गएर टाङ्गमुनि मुन्टो घुसारेर पस्रिइरहन्थ्यो । खान पनि मन गर्दैनथ्यो ।
अनि बेलुकी डल्फिन बेबी घरफर्के पछि मात्र उसको न्यास्रो मेटिन्थ्यो र उसमा फूर्ति भरिन्थ्यो । अनि ऊ डल्फिनको काखमा चढेर खुशी हुँदै उसलाई झँगेल्न थाल्थ्यो ।
तर हिजो आज बेबी पनि चाँडो घर आउन्नथी । एस्.एल.सि. परीक्षाले उसको ढोका घच्घच्याउन थालिसकेकोले स्कूलपछि ऊ प्रायः साथीहरू कहाँ सह अध्ययन गर्न जान्थी र राती अबेलै फर्कन्थी । घर आएपछि पनि उसलाई लाइकासँग खेल्ने त्यति फुर्सत हुँदैनथ्यो । उसप्रतिको कर्तव्य ऊ फगत उसका बारेमा खै खबर गरेर मात्र पूरा गर्थी - "लाइका डियर ! मुवाँ ! लाइले खायो Û के खायो मुवाँ < " बस् ।
सडक पारिको यो बङ्गलापनि कर्णेलकै हाराहारीको तर बिग्रिएको खान्दानी बाबुसाहेबको थियो । 'हिङ्ग नभए पनि हिङ्ग बाँधेको टालो त छ ए' भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै बाबुसाहेवले आफ्नो पुर्ख्यौली शोख पालेकै थिए - एउटी बैंसालु बेलाइती कुकुर्नीका रूपमा । लाइका आफ्नो एकलोपनको न्यास्रो मेटाउन (कि आफ्नो अतृप्त वासनालाई मानसिक तृप्ति दिलाउन Û) त्यससँग मूक प्रणययाचना गरिरहन्थ्यो । तर उसको यो तृप्ति धेरै बेर रहन पाउन्नथ्यो । एउटी तरुनी आइमाई आएर उसकी प्रेयसी (शायद) लाई तानेर (कहिले कहीं बोकेर पनि) भित्रतिर लान्थी । अनि त लाइकाको विक्षोभ झन अकासिन्थ्यो र ऊ भाउन्नाएझैं टप (छत) र वरण्डामा रिङ्न थाल्थ्यो ।
यो दृश्यले लाइकाको उत्तेजनामा घिऊ थप्ने काम गर्थ्यो शायद ! उसको भुकाइ पनि आक्रामक हुन्थ्यो र चेष्टा पनि । अगि पछि आइरहने र राम्ररी चिनिएको मानिसलाई पनि ऊ झम्टन पुग्थ्यो । त्यसैले मानिसहरू त्यो घरमा आउँदा निकै होस गरेर मात्र आउँथे । बेबी सँगै प्रायः त्यहाँ आइरहने उसकी घनिष्ठतम संगिनी रेजिनालाई पनि उसले एक दिन एक्कासी झम्टिन पुगेको थियो । अनि रेजिनाले सोधेकी पनि थिई - "तेरो लाइका कतै बौलाउन त लागेन < तैंले उसलाई रेबिजको सुइ त दिइस् <"
"होइन, त्यस्तो त केही छैन ! हिजो आज अलि उत्ताउलिएको छ यो, बढी नै भुक्छ । तर कसैलाई टोकिहालेको चैं छैन ।" - डल्फिनले भनी । अनि दुवै जना पढाइमा हराए । लाइकाको बारे डल्फिनले पनि बिर्सिइ ।
त्यस दिन अर्थात् जुन दिन त्यो वीभत्स घटना भयो, लाइका सधैं झै छत (टप) को पश्चिमी रेलिङ्गको वालमा टेकेर सडकपट्टिको साबिक झयालमा हेरेर उभिएको थियो । उताको झयालमा पनि उसकी मायालु बसेकी थिई । दुवै प्राणी मूक भाषामा आँखै आँखामा मनका कुरा गरिरहेका थिए शायद । त्यसै बेला त्यस बङ्गलाकी तरुनी (छोरी बुहारी के हो, कि तरुनी नोकर्नी सुसारे हो) आएर कुकुर्नीलाई घिच्याउँदै भित्रतिर लगी । त्यसले लाइकाको उन्मादलाई चरममा पुर्‍याइदिएको थियो । ऊ रौं ठाडा पारेर आँखामा हिंसाको फिलिङ्ग भरेर गुर्राएको थियो - "ङयार्र्रर्र्रर्र ! र्घर्ुररर !''
ठीक त्यसै बेला बेबी डल्फिन बाहिरको सिक्रीद्वार खोलेर उसलाई बोलाउँदै भर्‍याङ चढ्न थाली - "लाइका ! लाइका ! लाइका के गर्दै छ मुवाँ - त्यसलाई खान दिस्यो - ... के खायो त्यसले <
उसको स्वर सुनेर लाइकाको उन्माद साँच्चै चरममा पुगेको थियो । ऊ विक्षिप्तझैं भर्‍याङतिर झम्टदै गयो । डल्फिन बेबी भर्‍याङको पहिलो घुम्ती घुमेर दोस्रो खण्डको तीन चार सिढी उक्लिइसकेकी थिई । लाइकाले एक्कासी झम्टादिएर उसलाई समेत लिएर खुर्मुरियो । दुवै एकै पल्ट खुर्मुरिदै घुम्तीको विश्राम (प्लेटर्फम) मा डल्फिन मुनि लाइका माथि पर्ने गरी खसे । डल्फिनलाई लाइकाको हेक्कै रहेन । कुनै अज्ञात जनावरले आफूलाई हमला गरेको ठानेर ऊ नराम्ररी चिच्याई - "आमा ! लौन ! लौन ! मार्‍यो आमा ! "
यस पल्ट उ उसको समाजमा प्रयोग गरिने सभ्यताको जडाउरी शब्द 'मुवाँ' को सट्टा अज्ञानमै नेपाली भाषाको 'आमा' शब्द स्वाभाविक रूपले बोल्न पुगी । उसको त्यो आतसको चित्कार सुनेर उपल्लो समाज (माथ्लो सोसाइटी) को कीटि पार्टीबाट भर्खरै फर्किएर शयन कक्षमा लुगा कपडा र गहना फेर्न थालेकी मोनिका राणा (आमा) आत्तिदै भर्‍याङको टाउकामा पुगिन् - "लौ न, लौ न ए के भो बेबीलाई - बेबी ! किन यसरी चिच्याएकी < के भयो लाइकालाई <
त्यसै बेला अफिसको ड्यूटीबाट फर्केका करसाप पनि गराजमा आफ्नो मोटर थन्क्याएर आइ पुगेका थिए । भित्र पस्ता पस्तै उनका आँखा भर्‍याङको पहिलो मोडको विश्रान्ति (प्लेटर्फम) मा लडिरहेकी छोरी र उसमाथि चढिरहेको लाइका डाँगोलाई देखेर उनका आँखामा बलात्कारको दृश्य चित्रित भयो । बिना सोच छोरीलाई त्यस कुकुरले बलात्कार गर्न लागेको ठाने उनले । उनको दिमागले अरु कुरा सोच्नै सकेन । एक्कासी उनको खानदानी फौजी क्रोध उम्लि हाल्यो । उनले बगलको दापमा झुण्डिएको फौजी रिभल्वर झिकेर ठोकीहाले - ठ्याईं ठ्याईं ठ्यार्इं । कुकुर ऐया पनि भन्न नपाई ठण्डा भयो ।
अनि कुकुरको लासले थिचिएकी, आतङ्कले नीली फुस्री भएकी छोरीलाई उठाएर सुम्सुम्याउँदै कम्पित स्वरमा भने - "के भयो छोरी - तिमीलाई सारो चोट त लागेन < किन यसरी बौलायो यो लाइका < यस्तो त कहिल्यै गर्दैनथ्यो किन बौलायो यो < .. ल अब नडराऊ ! त्यो मरिसक्यो ।"
उनको फौजी रिभल्वरको तातो तातो गोली खाएर ऐया पनि भन्न नपाई ढलेको त्यो निरीह प्राणीले मर्ने बेलामा अत्यन्त करुण आँखाले उनलाई हेरेको थियो । ती निरीह आँखामा छल्किएको अनन्त पीडाको सम्झनाले उनलाई एक्कासी भावुक तुल्याइदियो । यस बिचराले बाँचुञ्जेल त उनको राम्रै सेवा गरेको थियो; धन मालको र घर परिवारको हेरचाह त गरेकै थियो शिकार जाँदा पनि उनलाई निकै सहयोग गरेको थियो । आज यसरी आफ्नै हातले उसको जीवनको अन्त्य गराएका थिए उनले ।
जीवन भरको निरंकुश फौजी अनुशासनमा अत्यन्त कठोर बनेको उनको छाती पनि अहिले पग्लिएर आँखामा पानी बनेर छल्कन थाल्यो । त्यसले उनको स्वरलाई पनि भिजाइदियो । उनले भक्कान्निएको स्वरमा आफ्नो अर्दलीलाई बोलाएर आदेश गरे - "लौ यसलाई रानीबाग (किङ्गस् गार्डेन_ को पारिजातको रुखमुनि लगेर हिफाजतसाथ गाडिदिनु । यसले प्रयोग गर्ने गरेका सबै सामान थाल (प्लेट), कचौरा (बाउल्स्) हरू पनि यसैका साथमा गाडिदिनु । .... अँ, अनि सुन्, पुरेतलाई डाकेर यसको सद्गत् पनि गरिदिनु । बिचरा छोरोजस्तै गरी पालेको यसलाई आज आफ्नै हातबाट ....... के गर्नु यसले यसै गरी मर्नु लेखेको रहेछ ।"
बोल्दा बोल्दै कर्णेलको घाँटी अँठिए जस्तो भएर उनी बोल्न सकेनन्; आँखा पनि बढी नै छल्छलाएर आयो उनको । उनले प्लेटफर्ममा तेर्सिएको लाइकाको लास र त्यसको आसपासमा फैलिएर सुक्तै गएको कालो रगतलाई हेर्नै सकेन, हतार हतार सिढी चढ्दै आफ्नो कोठातिर लागे ।
२०६२ मङ्सिर १६